ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ): ပုံနှိပ်မီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာအားပြိုင်ဆွေးနွေးပွဲ( ဆွေးနွေးချက်များ) ပထမပိုင်း
ပုံနှိပ်မီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာအားပြိုင်ဆွေးနွေးပွဲ( ဆွေးနွေးချက်များ) ပထမပိုင်း
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ၊ရွှေဂုံတိုင် ၊ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမမှာ ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်(teen ) မဂ္ဂဇင်းက ဦးစီးပြီး ကျင်းပခဲ့တဲ့ “ ပုံနှိပ်မီဒီယာနှင့် အွန်လိုင်းမီဒီယာ အားပြိုင်ဆွေးနွေးပွဲ”လေးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပုံနှိပ်ဘက်က ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တာမို့ ကိုယ့်အမြင်အနေနဲ့မတင်ပြဘဲ ပွဲ အသံဖိုင်ကို ပြန်နားထောင်ပြီး ပြော သွားသမျှတွေကို အစအဆုံး အတိအကျနီးပါး ( တချို့ မလိုအပ်ဘဲဖောင်းပွနေတဲ့စကားလုံးတချို့ကလွဲရင်) ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံနှိပ်မီဒီယာ - နန်းကြာဖြူ (ဘားအံ) ၊ ခင်ဆုမြတ်ထွန်း၊ ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ)
အွန်လိုင်းမီဒီယာ- မြသွေးနီ၊ နေဘုန်းလတ်၊ သူရဿဝါ
ပွဲစီစဉ်သူ - လင်းစက်နွယ်
ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာများ- ၀င်းငြိမ်း၊ မျိုးမြင့်ညိမ်း၊ မသီတာ (စမ်းချောင်း)
လင်းစက်နွယ်---- မီဒီယာလောကမှ စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ စာရေးဆရာ ဆရာမများနဲ့တကွ တက်ရောက်အားပေးကြတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့စာရေးဆရာမ လင်းစက်နွယ်ပါ။ ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းမှာ ကဗျာတွေ ၊၀တ္ထုတွေရေးသားနေပါတယ်။
ဒီပွဲလေးကို စီစဉ်ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်မတို့teen မဂ္ဂဇင်းက သုံးလတစ်ခါ။လေးလတစ်ခါ ပွဲလေးတွေစီစဉ်ကျင်းပမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပွဲကိုတော့ 9th Anniversary ဆိုပြီး ၂၀၁၁၊ စက်တင်ဘာလမှာ တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၂ဇန်န၀ါရီလမှာ လွတ်လပ်မှု ၊ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အနုပညာဆိုပြီးတစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကတော့ တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ “ ပုံနှိပ်မီဒီယာနဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာဆွေးနွေးပွဲ”ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ဆိုတဲ့ မီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ ပုံနှိပ်ကရော၊အွန်လိုင်းကပါ တစ်ထောင့်တစ်နေရာစီက ပါဝင်အကျိုးပြုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကိုရော၊အားနည်းချက်တွေကိုပါ ကောင်းစွာသဘောပေါက် နားလည်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေက ဘယ်မီဒီယာကို အသုံးပြုရင် ကိုယ်နဲ့ ပိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာ သဘောပေါက်နားလည်ဖို့ စာရေးဆရာ၊ဆရာမများနဲ့စုစည်းပြီး ဒီပွဲလေးကို စီစဉ်တင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျွန်မ ဆရာ၊ဆရာမများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာဘက်ကဆွေးနွေးမဲ့ဆရာဆရာမများထဲက ဆရာမနန်းကြာ ဖူဘားအံ ဟာဆိုရင် ၂၀၀၆အောက်တိုဘာလကစပြီး ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်းမှာဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်စတင်ရေးသားပြီး စာပေလောကကို ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ အခုဆိုရင်ဆရာမဟာ ၀တ္ထုတွေ၊ကဗျာတွေဆက်လက်ရေးသားလျက်ရှိပါတယ်။ ဆရာမနန်းကြာ ဖူရှင့် .... ဒီပွဲလေးကျင်းပရတဲ့အပေါ်ဆရာမအမြင်ကိုသိချင်ပါတယ်။
နန်းကြာဖြူ- ခုခေတ် လူငယ်တော်တော်များများက အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုအားသာနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံနှိပ်မီဒီယာဆိုတာလည်း ပစ်ပယ်လို့မရတဲ့အကြောင်း လူငယ်တွေကို သိစေချင်ပါတယ်”
ပုံနှိပ်မီဒီယာဘက်မှ နန်းကြာဖြူ(ဘားအံ) ၊ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) ၊ခင်ဆုမြတ်ထွန်း
လင်းစက်- အော်..ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ အခုဆက်လက်ပြီး ဆရာမ ခင်ဆုမြတ်ထွန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆရာမခင်ဆုမြတ်ထွန်းဟာဆိုရင် Myanmar Egress Capacity Development Center မှာအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ ဆရာမဟာအလင်းတန်းဂျာနယ်၊ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်းတို့မှာဆောင်းပါးတွေ သတင်းတွေ ရေးသားနေပါတယ်။ ဆရာမရှင့်......... ဒီပွဲမှာ ပုံနှိပ်မီဒီယာဘက်က ပါဝင်ဖြစ်ပုံလေး သိချင်ပါတယ်။
ခင်ဆုမြတ်ထွန်း- ကျွန်မရေးဖြစ်နေတဲ့ ဖူးငုံတို့၊အလင်းတန်းတို့ဆိုတာလည်း ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေလေ..။ကိုယ်တိုင်လည်း ပုံနှိပ်ကိုပဲအားသန်တာမို့ ပုံနှိပ်ဘက်က ပါဝင်ဖြစ်တာပါ
လင်းစက်- ဟုတ်ကဲ့။ အခု ဆရာဝေမိုးနိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆရာဝေမိုးနိုင်မုံရွာဟာဆိုရင် အသက် (၁၇) နှစ်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်က ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်းမှာဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ဖော်ပြခံရစဉ်ကစပြီးစာပေလောကကိုရောက်ရှိခဲ့သူပါ။ အခုဆိုရင်သူဟာ waimoenaing.blogspot.com ဆိုပြီး ဘလော့ဂ်တွေလည်းရေးနေပါတယ်ရှင်။ ဆရာဝေမိုးနိုင်.......ဒီပွဲလေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဆရာ့အမြင်လေးသိပါရစေ။
ဝေမိုးနိုင်- ပုံနှိပ်မီဒီယာနဲ့အွန်လိုင်းမီဒီယာက အခုအချိန်မှာပြည်သူလူထုက မီဒီယာနှစ်ခုလုံးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြတာမို့ ဒီပွဲဟာလုပ်သင့်တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အုပ်စုနှစ်စု အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက် ဒီပွဲဟာ လုပ်သင့်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့မြင်ပါတယ်
လင်းစက်- ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ။် အခု အွန်လိုင်းဘက်ကဆရာများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပထမဆုံးဆရာမ မြသွေးနီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆရာမမြသွေးနီဟာ www.myathwayni.com ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှာစာရေးသားနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမဟာ ၂၀၁၁ ဧပြီမှာ အွန်လိုင်းရွှေဝတ္ထုတိုပြိုင်ပွဲ ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ဆရာမဟာ ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်းမှာ Blog Digest ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာ ဘလော့ဂ်ဂါတွေရဲ့ ကောင်းနိုးရာရာစာမူတွေကိုရွေးချယ်ဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။ ဆရာမရှင့် ဒီပွဲလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆရာမအမြင်လေးကို ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်
မြသွေးနီ- ဒီနေ့ပွဲလေးဟာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ဆိုတဲ့ မီဒီယာလောက အတွက် အများကြီးအထောက်အပံ့မဖြစ်တောင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တစ်နေရာက နေ ထိရောက်တဲ့ message တွေပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ခေတ်ဟာ ၇ပ်တန့်မနေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခေတ်နဲ့အမီ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာပေါ်မှာလည်း လူတွေလိုက်ပါအသုံးပြုလာတာကို လည်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ နောက်..အလားတူပဲ ပုံနှိပ်နဲ့ အွန်လိုင်း ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုလက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒီပွဲကဖော်ဆောင်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
အွန်လိုင်းမီဒီယာဘက်မှ သူရဿဝါ၊ မြသွေးနီ၊ နေဘုန်းလတ်
လင်းစက်- ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။ ကျေးဇူးပါ။ အခု ကျွန်မ ဆရာသူရဿဝါနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆရာသူရဿဝါဟာ ၂၀၀၇ ဇူလိုင်လ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မဂ္ဂဇင်းမှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးသားပြီး စာပေလောကထဲရောက်ခဲ့သူပါ။ ပြီးတော့သူဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဆရာ့ဘလော့ဂ်လိပ်စာကတော့ www.thurathawah.net ဖြစ်ပါတယ်။ ဆ၇ာဟာ အခုဆိုရင် သရော်စာတွေ၊ဆောင်းပါးတွေကဗျာတွေ ရေးသားလျက်ရှိပါတယ်။ ဆရာရှင့်... ဒီပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဆရာ့ အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦါ်။
သူရဿဝါ- ဒီပွဲလေးကနေ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ အားသာချက်၊အားနည်းချက်တွေကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လင်းစက်- ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခု ကျွန်မ ဆရာနေဘုန်းလတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆရာနေဘုန်းလတ်ဟာ၂၀၀၄ခုနှစ်ကတည်းက မဂ္ဂဇင်းများစွာမှာ အတွေးဆောင်းပါးတွေ။ ၀တ္ထုတွေ အက်ဆေးတွေ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာတော့ ဆရာဟာ ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော် ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်ပြီး စာတွေရေးသားခဲ့ပါတယ။် ၂၀၀၈ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလမှာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၂ဇန်န၀ါရီလမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ရဲရဲတောက် ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရှင့်.... ဒီပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဆရာ့အမြင်လေးကို ဖလှယ်ပေးပါဦး
နေဘုန်းလတ်- မြန်နှုန်းတစ်ခုနဲ့ရွေ့နေတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ အရင်က အင်တာနက်ပေါ်မှာ personal diary သဘောမျိုးရေးနေကြရာကနေ သတင်းပုံစံမျိုးတွေ ရေးလာကြတာဟာ အွန်လိုင်းမီဒီယာဆိုတဲ့ နေရာတစ်ခုပေးလာရတဲ့အထိ အရေးပါလာတဲ့အနေအထားကိုေ၇ာက်နေပါပြီ။ ပုံနှိပ်မီဒီယာဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့လက်လွှတ်လို့မရသေးပါဘူး။ ဒီမှာပဲမီဒီယအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ခေတ်မှာ ကျွန်တော်လည်း အွန်လိုင်းဘက်ကနေ ကျွန်တော့်အမြင်တွေ ပြောခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပွဲကနေ မီဒီယာနှစ်ခုရဲ့ အားသာချက်၊အားနည်းချက် တွေ ဖော်ထုတ်ပြီး အားသာချက်တွေ ဘယ်လိုအားကောင်းအောင်လုပ်မလဲ၊ အားနည်းချက်တွေ ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာ အကျိုးအမြတ်ရယူပြီး မီဒီယာလောက တိုးတက်ဖို့အကျိုးရှိတဲ့ခြေလှမ်းအစလို့ မြင်ပါတယ်။
လင်းစက်- ဟုတ်ကဲ့ အခုကျွန်မ မီဒီယာနှစ်ခုကြားကနေ ကြားခံဆွေးနွေးပေးမယ့် ဆရာမ ခင်သန္တာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆရာမဟာ ခင်သန္တာ၊မယ်လေး စတဲ့ကလောင်တွေနဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာစာပေလောကကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်ပေါင်းများစွာမှာ ဆောင်းပါး၊၀တ္ထုများရေးသားနေပါတယ်ရှင်။ ဆရာမရှင့် ဆရာမ ဒီပွဲလေးမှာ ကြားခံဆွေးနွေးသူအဖြစ်ပါဝင်ဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပေးပါ
ခင်သန္တာ- ကြားခံအဖြစ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာလည်း တကယ်တော့ ပုံနှိပ်ကော၊ အွန်လိုင်းကောရဲ့ ကျွန်မမသိသေးတဲ့အချက်တွေကို နားထောင်ရုံသက်သက်ပါ။ ကြားခံဆွေးနွေးသူလို့နာမည်ခံထားပေမယ့် ကျွန်မကိုယ်တိုင်အများကြီးမသိသေးတဲ့အတွက်နားထောင်ပေးရုံသက်သက်ပါ။
လင်းစက်- အော်....ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဆရာမရေ..........ပွဲလေးစလိုက်ကြရအောင်.နော်.......။
ခင်သန္တာ --- ဟုတ်ကဲ့ ။ပွဲလေးစမယ်ဆိုတော့ ပထမဆုံး ပရိသတ်တွေထဲကနေ တစ်ဘက်က ပုံနှိပ်၊တစ်ဘက်ကအွန်လိုင်းပေါ့။ ကျွန်မတို့ကြားက Facilitatorနှစ်ယောက်မှာကိုပဲအားသန်တဲ့ ဘက်ဆိုတာရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံး ပုံနှိပ်မီဒီယာဘက်က ပရိသတ်များ လက်ညှိုးလေးထောင်လိုက်ကြရအောင်ရှင့်...။
ဟာ..............အများကြီးပဲ.. ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခု အွန်လိုင်းဘက်က ပရိသတ်များ လက်ညှိုးထောင်လိုက်ကြရအောင်...
အဲ.............နှစ်ဖက်လုံးမှာပဲ ပရိသတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့....ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဟုတ်ကဲ့..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကဲ..လင်းစက်ရေ..... ပွဲလေးစလိုက်ရအောင်.. အခု ကျွန်မတို့ ပုံနှိပ်မီဒီယာဘက်ကစကြတာပေါ့။ ဒီတော့ဆရာမ ခင်ဆုမြတ်ထွန်း .. ။ ပုံနှိပ်မီဒီယာရဲ့ အားသာချက်တွေ ဆရာမ ပြောပြပေးပါရှင့်။
ဆုမြတ်- မီဒီယာက အမျိုးမျိုးပေါ်လာတာပေါ့နော်...။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲ မီဒီယာတွေပေါ်လာလာ ပုံနှိပ်မီဒီယာကို အခြေခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာက အစဉ်အဆက်သုံးလာခဲ့ကြတဲ့ traditional media ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ပုံနှိပ်မီဒီယာက အင်အားလည်းကြီးမားပါတယ်။ စာဖတ်တတ်တဲ့သူတိုင်းဟာ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေကနေပြီးတေ့ာ ခိုင်မာမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ပုံနှိပ်မီဒီယာဆိုတာဟာ ခေတ်တွေ၊သမိုင်းတွေ၊စနစ်တွေကို recordလုပ်ထားနိုင်တဲ့ မှတ်တမ်း တွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီး ကျွန်မပြောချင်တာက Quality Product တွေကို ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာသာတွေ့နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက သတင်းတွေကို ဖော်ပြတာအပြင် ဝေဖန်နိုင်တဲ့၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဆရာဆရာမတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ၊ သတင်းဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေက ပုံနှိပ်မှာသာ တွေ့နိုင်တာပေါ့။ ကျွန်မဥပမာတစ်ခုပေးချင်တာက ညတွေမှာဘောလုံးပွဲတွေလာတယ်ပေါ့၊ လူတွေက နောက်ရက်ထုတ် ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေမှာ ပွဲအကြောင်း high light လုပ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ကိုဖတ်ကြတယ်ပေါ့။ ဒါအကောင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုပါ။နောက် ပုံနှိပ်မီဒီယာဟာ စစ်မှန်တယ်၊ ခိုင်မာမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်တွေကို ပေးနိုင်တဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ပုံနှိပ်မှာ ဖော်ပြခံရဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် လွယ်လင့်တကူမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံနှိပ်မီဒီယာက သတင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာ စားပွဲပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းလာရတာပါ။ စားပွဲတွေဆိုတာ အယ်ဒီတာစားပွဲကိုပြောတာပါ။ ဒီတော့ လူတစ်ဦးချင်းစီကိုဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်တဲ့အရေးအသားတွေ၊ သတင်းဓါတ်ပုံတွေကို အယ်ဒီတာစားပွဲတွေက ဖြတ်တောက်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံနှိပ်က သတင်းတွေဟာ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘူး၊ မျှတတယ်။စစ်မှန်တယ်ဆိုတာတွေကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တာဟာ အားသာချက်တွေပါပဲ ။
ခင်သန္တာ- ကဲ...ဆရာတို့ရေ.. ပုံနှိပ်ဘက်က အားသာချက်တချို့ကိုပြောသွားပါပြီ။ ဆရာတို့အွန်လိုင်းဘက်က ဘာများမေးချင်သေးလဲ။
နေဘုန်း- ညီမပြောသွားတဲ့ Quality Product တွေကို ပုံနှိပ်မှာသာတွေ့ရတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ကွာလတီပရောဒက်တွေ လူထုဆီ ဘယ်လောက် ပျံ့နှံ့မှုရှိလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ဝေမိုး- ဟုတ်ကဲ့။ ဒီနေ့အခမ်းအနားကို ကြွရောက်လာတဲ့လူကြီးမင်းများနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အပေါ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်သွားတဲ့တစ်ရက် ၊ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန်
့လေးနဲ့ ရှားရှားပါးပါးကြုံကြိုက်လိုက်ရသလိုမျိုး ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာရှိလှပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပရင့်မီဒီယာဘက်ကနေ ကိုယ်စားပြု ပြောသွားမှာပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပရင့်မီဒီယာအပေါ် ကျွန်တော့်အမြင်လေးရယ်၊ ပရင့်မီဒီယာမှာကျွန်တော် စာရေးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးရယ်ကို တင်ပြပါမယ်။
ပရင့်မီဒီယာသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စာပေဖန်တီးမှုအားဖြင့် ပြည်သူအစစ်အမှန်နဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရကြပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်ဆိုတာကလည်း ရွာငယ်ဇနပုဒ် မီးကလေးမှိတ်တုတ်အထိ ကျယ်ပြန့်နေတာဆိုတော့ မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အနုပညာ၊ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ကိုယ် ပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို ပြည်သူလူထုထံတိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူဆိုရာမှာ အခြေခံလူတန်းစားကစလို့ အလွှာအသီးသီးက စာဖတ်သူတွေဆီ တင်ပြနိုင်တယ် ။ ဒီလိုမတင်ပြခင်မှာလည်း ကြားမှာ အယ်ဒီတာက တည်းဖြတ်သေးတယ်။ အယ်ဒီတာဆိုမှတော့ စာပေဆိုင်ရာ အရည်အချင်း အနေအထားတစ်ခုအထိရှိလို့ အယ်ဒီတာဖြစ်လာကြတာဆိုတော့ သူတို့တတွေဟာ စာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အကောင်းအဆိုး၊ အကျိုးအပြစ်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ စာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီစာဟာ ပြည်သူကိုအကျိုးပြုတဲ့စာလား၊ ဒီစာဟာ အဆိပ်အတောက်လား။ ဒီစာဟာ အရည်မရ အဖတ်မရလား၊ ဒီစာကတော့ပြည်သူသိသင့်တဲ့စာလား စသဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှ စာမျက်နှာပေါ်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံနှိပ်မီဒီယာက စာတိုင်းသည် ပြည်သူအပေါ် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့၊ အကျိုးမရှိဖြစ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါတယ်။
နောက် ပုံနှိပ်မီဒီယာကို ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ထူးထူးထွေထွေ လိုအပ်ချက်မရှိပါဘူး။ လျှပ်စစ်မီးကစလို့ပေါ့။ ဘာကိုမှစောင့်ဆိုင်းနေစရာလည်းမလိုတဲ့အတွက် စိတ်မရှည်မှုတွေနဲ့လုံးထွေးသတ်ပုတ်နေဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဘယ်နေရာကိုယူသွားမလဲ။ အလွယ်တကူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ယူသွားလို့ရမယ။် မယူသွားချင်ဘူးပဲထားဦး၊ ရတယ်။ ဂျာနယ်တစ်စောင်၊ စာအုပ်တစ်အုပ် ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမဆို အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်။ ဒီတော့ ပုံနှိပ်မီဒီယာဟာ ပြည်သူအများစုလက်လှမ်းမီတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ၊ အင်တာနက်တို့ကို အချိန်ပေးဖတ်ရှုတာထက် မဂ္ဂဇင်း ၊ ဂျာနယ်ဖတ်ရှုသူတွေရဲ့ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖောက်သည်ချမှုမျိုးကသာ လူထုထဲမှာ ပျံ့နှံ့နေတာပါ။
ဒီတော့ ပုံနှိပ်မီဒီယာဟာ ဆင်းရဲချမ်းသာလူတန်းစားမရွေး ပြည်သူအားလုံးအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပြီးတော့ ယုံယုံကြည်ကြည်အားထားလာနိုင်တယ်။ ဒီတော့ လူထုကို ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ ၊ သိစေချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို တကယ့်ပြည်သူလူထုဆီရောက်ရှိနိုင်တဲ့ ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာ ကျွန်တော်စာတွေ အားပြုရေးသားနေဖြစ်ပါတယ်။
ခင်သန္တာ- ဆရာရယ်... ပုံနှိပ်မီဒီယာရဲ့ပျံ့နှံ့မှုအားလေးကိုဆွေးနွေးသွားတာ ကောင်းလိုက်တာ ။ ကဲ....အွန်လိုင်းဘက်က ပြောပါဦး။
သူရ--- ပုံနှိပ်မီဒီယာရဲ့ပျံ့နှံ့မှုအားကိုပြောသွားတာ ကိုဝေမိုးနိုင် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက ပုံနှိပ်မီဒီယာရဲ့ ရသစာပေပိုင်းကို သိချင်ပါတယ်။
ခင်သန္တာ-- ရသစာပေဆိုရင်တော့ ဆရာမနန်းကြာဖြူပဲကျန်တော့တယ်။ ဆရာမ က ရသစာပေ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရေးနေတဲ့ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ပါ။
နန်းကြာဖြူ-- အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မ နန်းကြာဖြူ ဘားအံပါ။ ဒီနေ့ပွဲလေးမှာကျွန်မ စာဖတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ ပထမဆုံးပုံနှိပ်အကြောင်းမပြောခင် ဖန်သားပြင်စာမျက်နှာ တွေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အွန်လိုင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ ကြွေးကြော်သံက “ မြန်တယ် ၊မြန်တယ်၊ သိပ်ကို ပျံ့နှံ့လွယ် တယ် ” ဆိုတာပါပဲ။ မှန်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ဟာ နည်းပညာခေတ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးပို့တာမြန်သလို ကမ္ဘာဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့တွေကတော့အခုအချိန်ထိ အဲဒီရွာရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ..။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရ ကွန်နက်ရှင်တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ဆက်သွယ်မှုဧ၇ိယာ ပြင်ပကိုရောက်နေတတ်ပါတယ်။ အဓိက က လျှပ်စစ်မီးပါပဲ။ ရှစ်နာရီမှာနိုင့်ငံတော်သမ္မတကြီး မိန့်ခွန်းလာမယ်ကြေငြာတယ်။ ခုနှစ်နာရီခွဲမှာမီးပျက်သွားတယ်။ ကိုးနာရီမှာပြန်လာတယ်။ ကျွန်မတို့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲ...။အားလုံးပြီးသွားပြီလေ....။ ဒီတော့ကျွန်မတို့က နောက်နေ့ထုတ်သတင်းစာကိုဝယ်ဖတ်တယ်။ သတင်းစာမှာကျွန်မတို့ သမ္မတကြီးရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုမမြင်ရ၊ အသံကိုမကြားရပါဘူး။ဒါပေမယ့် ပြောသွားတဲ့ စကားအပြည့်အစုံကို ဖတ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီစာရွက်ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်။ နောင်လိုအပ်လာရင်လည်းပြန်အသုံးချနိုင်တယ။် ဖန်သားပြင်စာမျက်နှာတွေကတော့ သူထုတ်လွှင်တဲ့အချိန်မှသာ ကျွန်မတို့ကြည့်နိုင်တယ်။ သတင်းစာ ၊ဂျာနယ်တွေကတော့ အပတ်စဉ်လစဉ်နေ့စဉ်ထွက်ရှိတယ်။ ဒီတွေကိုအချိန်မရွေးလူတန်းစားမရွေး ငွေးကြေးလဲထပ်ကုန်စရာမလိုဘဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဖန်သားပြင်မီဒီယာတွေကတော့ အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး မီတာခကတော့ကုန်နေမှာပါ။ နောက် ဖန်သားပြင်တွေမှာစာဖတ် ရတာ အရသာမရှိလှပါဘူး။ သုတအနေနဲ့ကောင်းပေမဲ့ ရသပိုင်းမှာတော့ တစိမ့်စိမ့်ခံစားဖတ်နေလို့မရပါဘူး။ ကျွန်မတို့က အချိန်နဲ့ငွေကိုလဲ ငဲ့ရပါသေးတယ်။ ကွန်နက်ရှင်နဲ့မီးကလည်း အစိုးမရပါဘူး။
ကျွန်မဥပမာပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ ပုံနှိပ်မီဒီယာဆိုတာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူထုကြီးနဲ့တူပြီး အွန်လိုင်းမီဒီယာကတော့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့ လူတစ်စုနဲ့တူပါတယ်။ သူက ကားစီးတဲ့အတွက် ခရီးရောက်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာကားပဲအမြဲစီးနေရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာသမားတွေက လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အတွက် ခရီးနှောင့်နှေးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းလျှောက်သွားခြင်းအားဖြင့် ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်။ အဆီပိုတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
( ( ( ( လက်ခုပ်သံများ ) ) ) )
နောက်တစ်ချက်က ကားပဲအမြဲစီးနေမယ်ဆိုရင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မယူဆတာကတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကားစီးဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် အနာဂတ်မှာ ကျန်းကျန်းမာမာ နေထိုင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လမ်းလျှောက်တာကို မဖြစ်မနေလုပ်ရပါမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
( ( လက်ခုပ်သံများ) )
ခင်သန္တာ-- ကျွန်မတို့ ပုံနှိပ်မီဒီယာဘက်ကတော့ အားသာနေပါပြီ။ ကဲ .... ဆရာတို့ ကားစီးကြမလား။ လမ်းလျှောက်ကြမလား ။ ပြောပါဦး။
နေဘုန်း -- ကျွန်တော် မနက်ဖြန် ရွှေဘိုကိုသွားဖို့၇ှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လမ်းလျှောက်သွားမလား စဉ်းစားနေပါတယ်။
အွန်လိုင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဓိက ပြောချင်တာက speed ပေါ့နော်။ speed အမျိုးမျိုးနဲ့ သွားနေကြတဲ့ speed မတူညီမှုတွေ၇ှိတယ်။ ခေတ်က မြန်နှုန်းမြင့်နေပြီ။ သူများတွေ လေယာဉ်စီးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က ဆိုက်ကားနဲ့ လိုက်နေလို့ မဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းရမှာဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးသွားနေတဲ့ speed ကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်speedနဲ့လိုက်ရမလဲသိဖို့လိုတယ်။ ပရင့်မီဒီယာမှာ အမြန်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ သတင်းစာတစ်စောင် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထွက်တယ်။ ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်တာကိုနောက်နေ့မနက်မှသိရတယ်။
“ အွန်လိုင်းမီဒီယာက ဘယ်လောက်မြန်သလဲဆို ကျွန်တော် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ၃မိနစ်စောင့်ဆိုတာကို သတိရမိတယ်၊ နေရာတစ်ခုမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုပါစို့၊ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်း၊ အသုံးချနိုင်တဲ့နည်းပညာသာ တတ်ကျွမ်းမယ်ဆို ဒီသတင်းကို ၃မိနစ်အတွင်း ပြည်သူလက်ထဲရောက်အောင် ပို့နိုင်၊ ဖြန့်နိုင်နေပြီ၊ ဥပမာပြောရင် – ပြီးခဲ့တဲ့7Julyအဖြစ်အပျက်မှာ အရင်တုန်းကဆို လူမသိသူမသိ ညမှောင်ကြီးထဲ ခဏပါဆို ခေါ်သွားပြီး တစ်ဘ၀လုံးစတေးခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့တယ်”
“ အခုကျတော့ မရတော့ဘူး၊ ဒီနှစ်7Julyမတိုင်ခင်ညမှာ ကျောင်းသားတွေကို လာခေါ်သွားတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ဘယ်သူ လာခေါ်သွားတယ်၊ ဘယ်အချိန် လာခေါ်သွားတယ်၊ ဘယ်သူတွေ ပါသွားတယ်ဆိုတာ နာမည်နဲ့တကွ သတင်းက ချက်ချင်း အွန်လိုင်း မီဒီယာပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီညအချိန်မှာ ဘယ်ပရင့်မီဒီယာကမှ ညကြီးမိုးချုပ် သတင်းမထုတ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာ အွန်လိုင်း မီဒီယာက ချက်ချင်းဆိုသလို ပြည်သူတွေ သိအောင် သတင်း ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်၊ အွန်လိုင်း အသုံးပြုနေတဲ့ လူငယ်တွေ၊ ဂျာနယ်လစ် လူငယ်တွေ၊ အကုန်လုံး သတင်းတွေ အချိန်နဲ့တပြေးညီ အွန်လိုင်းမှာ တင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
“အဲ့ဒီလို တင်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ နောက်နေ့7Julyပွဲ အရမ်းကို စည်ကားခဲ့တယ်၊ ဒါဟာ Transperancy – ရဲ့သဘော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလို့ မြင်တယ်။ ဒီမိုခရေစီစနစ်မှာ Transperancy ခေါ်တဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုက အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ အဲ့ဒီလို သတင်းတွေ အချိန်နဲ့အမျှ တင်ပေးနိုင်တဲ့ စီတင်ဇင်ဂျာနယ်လစ်လို့ ခေါ်တဲ့ လူထုသတင်းသမားတွေ ရှိနေပြီဆိုရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိလာပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်”
“ အဲ့ဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိလာရင် မတရားကိုယ့်ကို ဖိနှိပ်မယ့် ချုပ်ချယ်မယ့် သူတွေက သူတို့ ငါတို့ကို စောင့်ကြည့်နေပါလာ၊ ငါတို့ ဒီနေ့ တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ရင် နောက် ၃မိနစ်အတွင်းမှာ ဒီသတင်းကြီးက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့သွားမှာပါလားဆိုတဲ့ စိတ်၊ အဲ့ဒီစိတ် ၀င်သွားခြင်းဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပိုရှိလာတယ်”
“ မတရားမှုတွေလဲ လျော့နည်းသွားနိုင်တယ်၊ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က သတင်းငတ်မွတ်နေတယ်။ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ အကြာကြီး မစားပဲနေနေရတဲ့သူကို ထမင်းချကျွေးလိုက်သလို သတင်းတွေကို အငမ်းမရ ငတ်မွတ်နေကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီနေ့သတင်းသိရဖို့ နောက်တစ်နေ့ကို မစောင့်ချင်ကြတော့ဘူး၊ နောက်နေ့မနက် သတင်းစာထွက်မှ ဖတ်ရမယ့် အနေအထားမျိုး စိတ်မရှည် နိုင်တော့တဲ့အခါမှာ အွန်လိုင်းပေါ်က သတင်းတွေကို စောင့်ဖတ်ကြရတယ်။ ဒါကြောင့် အွန်လိုင်း မီဒီယာက ရှောင်လွှဲလို့မရပဲ အရေးပါလာခဲ့တယ်။ ပြောချင်တာ အဓိကိက Speedပါဘဲ။ Globalization ခေတ်ကြီးမှာသတင်းတွေကို ပြည်သူတွေဆီ အချိန်မှီပေးနိုင်တဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အွန်လိုင်းမီဒီယာက အများကြီးအားသာချက် ရှိတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် ”
ခင်သန္တာ -- ဒါကြောင့်ပဲ ဘလော့ဂ်ဂါ နေဘုန်းလတ်လို့ နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်မယ်နော်ဆရာ။ ကဲ.... ပုံနှိပ်ဘက်က မေးခွန်းလေးမေးပါဦး။
ဝေမိုးနိုင်--- ဆရာနေဘုန်းလတ်ပြောသွားတာ အင်မတန်အချက်အလက်ကျနပါတယ။် ကျွန်တော်သိချင်တာက အွန်လိုင်းမှာရေးနေကြတဲ့ စာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရသပိုင်းကို သိချင်ပါတယ်။
ခင်သန္တာ--- ရသပိုင်းဆိုရင်တော့ ဆရာမမြသွေးနီပိုင်မယ်ထင်တယ်နော်။ လုပ်ပါဦးဆရာမ။
မြသွေးနီ--- - “ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကျွန်မက နှစ်ကာလများစွာ သန္ဓေတည်ပြီး အခိုင်အမာရ တည်ခဲ့တဲ့ ပုံနှိပ်မီဒီယာအနေနဲ့ ယနေ့အချိန် ဖြည့်ဆည်းခွင့်မရရှိသေးတဲ့ အချက်များ၊ ကွက်လပ်များကို အွန်လိုင်းမီဒီယာကနေ ဘယ်လို ဆောင်ရွက် ဖြည့်ဆည်းပးနိုင်တယ်ဆိုတာကို အွန်လိုင်းမီဒီယာများ ဘက်ကနေ ပါဝင် ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းကို ကျွန်မတို့ လျစ်လျူရှုလို့ မရပါဘူး၊ လူတွေက ပြောကြတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးက ရွာဖြစ်သွားပြီတဲ့၊ အခုဆို ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို ဟိုဘက်ခန်းနဲ့ ဒီဘက်ခန်း လှမ်းအော်ပြောသလို ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းကလဲ အချိန်နဲ့တပြေးညီ သိနေနိုင်တဲ့ခေတ် ရောက်နေပါပြီ၊ အရာရာကို အချိန်နဲ့အမျှသိခွင့်ရနေပြီ။ အွန်လိုင်းမီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာ လူတစ်ယောက်ဟာအနည်းဆုံး ကွန်ပျူတာ အခြေခံတတ်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။ အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုထိတွေ့လိုက်ရတဲ့ လူကြီးအချို့သည်ပင် နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားလာကြပါပြီ၊ ကိုယ်တိုင် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာကြပါပြီ၊ နည်းပညာ၊ အင်တာနက်၊ အွန်လိုင်း၊ ဂလိုဘယ် လိုက်ဇေးရှင်းစတဲ့ စကားလုံးတွေက ယနေ့ခေတ်လူတွေနဲ့ မစိမ်းတော့ပါဘူး၊ .”
“ အွန်လိုင်းမှာ ရသသုတပိုင်းကို တစိုက်စိုက်မတ်မတ် ရေးသားနေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်၊ အဲ့ဒီဘလော့ဂါတွေထဲကပဲ အွန်လိုင်းပေါ်က ရသစာပေများကို ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ် ရောက်အောင် အားထုတ် ဆောင်ရွက်နေတာလဲ တွေ့ကြရပါတယ်၊ အခုဆို အွန်လိုင်းမှာ အွန်လိုင်းရသမဂ္ဂဇင်းတွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ၊ ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ၀တ္တု၊ ကဗျာ၊ အက်ဆေး၊ ဆောင်းပါး စတာတွေကို အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနေနိုင်ပါပြီ၊ တချိန်ထဲမှာပဲ အွန်လိုင်းမှာ ရသစာပေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ပြိုင်ပွဲတွေလည်း အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပေးနေပါတယ်၊ ပုံနှိပ်မီဒီယာက အစဉ်အလာရှိတဲ့ စာရေးဆရာကြီးများ ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရသစာပေပြိုင်ပွဲတွေလဲ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်.. ”
“တချိန်က တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့ စာတိုက်က စာပို့ဆက်သွယ်ကြရတယ်၊ နယ်ဖုန်း၊ အိုဗာစီးဖုန်းတွေကို အော်ပရေတာခံ ဆက်ခဲ့ရတယ်၊ အခုအချိန်မှာ သူတပါးကို မှီခိုနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး၊ တချိန်ထဲမှာပဲ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ခံစားချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်ရောက် ဖန်တီးခွင့်ရလာကြတယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေက ကလောင်သစ်တွေကို နေရာပေးနေကြပေမယ့် ၀န်နဲ့အား မမျှကြဘူး၊ လူငယ်တွေအတွက် လေ့ကျင့်ကွင်း မရှိဘူး။ စာမူပါဖို့စောင့်ရင်း စိတ်ဓာတ်ကျ နောက်ဆုတ် သွားနိုင်တယ်..”
“အွန်လိုင်းမှာ ရသစာပေဖွံ့ဖြိုးဖို့ အွန်လိုင်းရော၊ ပုံနှိပ်ပါ တာဝန်ရှိတယ်၊ အွန်လိုင်းရဲ့အားသာချက်က ပြန့်နှံ့လွယ်တယ်၊ Facebookမှာ Friend တစ်ထောင်ရှိရင် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ရသသတ္တုတစ်ပုဒ်ကို Friend တစ်ထောင်လုံးမဟုတ်တောင် အနည်းဆုံးငါးရာက ချက်ချင်း တပြိုင်နက်ထဲ ဖတ်နိုင်တယ်၊ အဲ့ဒီ ငါးရာမှာရှိတဲ့ Friendတွေကနေ ဆင့်ပွားပြီး ကျန်လူများပါ ဖတ်နိုင်ပါသေးတယ်၊ ဒီလို အွန်လိုင်းက ဆင့်ပွားဖတ်သွားတဲ့ စာဖတ်သူပမာဏ အချိုးအစားဟာ ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာ ပျံ့နှံ့တာထက် အချိန်တိုအတွင်း အများကြီးပျံ့နှံ့မှု ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်”
“ ရသစာပေကို အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေ များများဖတ်စေချင်တယ်၊ အွန်လိုင်းမှာ လူငယ်အများစု ရှိနေတယ်၊ ရသစာပေကို လူငယ်တွေရင်ထဲ စိမ့်ဝင်သွားဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ဒီဟာကို ပုံနှိပ်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ ဒီအွန်လိုင်းကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ရသအားပိုကောင်းလာမယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခင်သန္တာ---အွန်လိုင်းဘက်ကနေလို့ထင်တယ်နော်ဆရာမ။ ရသအကြောင်းပြောတာတောင် သုတတော်တော်ကဲပြီးပြောသွားတယ်။ ကဲ... ပုံနှိပ်ဘက်က ဘာများမေးချင်ပါသေးလဲ။
ဆုမြတ်-- အခု ရသပိုင်းလဲ ပြောပြီးသွားပြီ။ ဆရာ ၀ါ တစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ ဆရာဘာများ ဖြည့်စွက်ပြောချင်သေးလဲ..။
သူရ------ ကိုနေဘုန်းလတ်က Speedအကြောင်း ပြောသွားတယ်ပေ့ါနော်၊ အဲ့ဒီ Speedရဲ့ အနောက်မှာ ကပ်ပါလာတာက Spaceပေါ့၊ အခုခေတ်က အရမ်းကို မြန်နေတယ်၊ အဲ့ဒီလို အရမ်းမြန်နေတဲ့ ခေတ်နောက်ကို လိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ပေါ့ပါးနေရမယ်၊ လေးလေးလံလံပစ္စည်းကြီးတွေ သယ်ပိုးပြီး ခေတ်ကို အမီလိုက်လို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Data Storageပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က ရာထောင်ချီတဲ့စာအုပ်တွေကို Memory Stick တစ်ခုထဲမှာသိမ်းဆည်းထားလို့ရတယ်။ ကျွန်တော့်မှာEbook Playerတစ်ခုရှိရင် ကျွန်တော် ဒါတွေကို ချက်ချင်းဖတ်လို့၇တယ်။ လမ်းပေါ်မှာ အပြေးအလွှားဖတ်နေလို့ရတယ်။ ဒီလိုဖတ်ဖို့ စာအုပ်လိုက်ကြီးဘာလို့သယ်မှာလဲ။ stick ထဲမှာ PDF လုပ်ပြီးသယ်သွားမှာပေါ့။ နောက် ဒီလို စာအုပ်တွေကို stick တွေနဲ့သိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေက စာအုပ်ပုံကြီးတွေ မှာ တခြားပစ္စည်းတွေထားလို့ရမယ့်နေရာ ပိုမလာဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့က ဖြတ်ထိုးဥာဏ် သုံးရမယ်၊ နောက်တစ်ခုက စာအုပ်တွေ ဂျာနယ်တွေ ရေစိုရင် ပျက်စီးသွားနိုင်သေးတယ်၊ စာအုပ်တွေဆိုလည်း ဟောင်းသွား နိုင်သေးတယ်၊ ကျနော်တို့ကြတော့ Ebook တစ်ခု မှားပြီး ဖျက်မိတယ်ဆိုရင်တောင် Recovery Softwareရှိရင် ချက်ချင်း ပြန်ရှာလို့ရတယ်၊ ဒါလဲ အားသာချက်ပါ ။
နောက် ဒီမိုခရေစီနိုင်ငံတစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အရေးပါတဲ့အချက် ၂ချက် ရှိတယ်။ Civil Society ဆိုတာရယ် Capacity Building ရယ်ပေါ့၊ အခုဆို Online ကနေ ပညာသင်လို့ရတဲ့ E Education တွေ အဲဒီစနစ်တွေလည်း ခေတ်စားလာပြီ။ အချိန်ကုန် လူပမ်းသက်သာလာမယ်၊ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က Capacity Building ကို တည်ဆောက်နေတာပါဘဲ၊ နောက် အွန်လိုင်းမှာ Social Networkတွေ ရှိတယ်၊ ဥပမာ – Facebook၊ ရခိုင်အရေးကိစ္စတွေ၊ စက်ဆန်းမြို့နယ် ပေါက်ကွဲမှုတွေ၊ အဲ့ဒါတွေက Facebookမှာ ချက်ချင်း တက်လာတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကနေ သတင်းတွေ မျှဝေရင်း မြန်မာတွေ အွန်လိုင်းမှာ စုစည်း၊ အလှူငွေတွေ ချက်ချင်းကောက်ခံ၊ ဒုက္ခသည်တွေဆီ ချက်ချင်း လက်ရောက် သွားလှူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ တကယ်အကျိူးရှိတဲ့ Civil Society တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ ဒီမိုခရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ Capacity Building နဲ့ Civil Societyကို အများကြီး အထောက်အပံ့ ပေးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
((( လက်ခုပ်သံများ )))
ခင်သန္တာ- -- ဆရာဝါ့ရဲ့ စာအုပ်သယ်ဆောင်တဲ့ စနစ်လေးက ကောင်းလိုက်တာ၊ ဆရာ့ရဲ့ Memory Stickလေး ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်ရင်ရော ဆရာ…
သူရ------ဆရာမ... ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်ရင် Recovery Software ရှိပါတယ်၊ ချက်ချင်း ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်ဆရာမရဲ့
ဒါကတော့ ပွဲရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်း ( အားသာချက်ဆွေးနွေးခန်း) ပါပဲ။ ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ပဲ ဒီ ဆောင်းပါး ပထမပိုင်းကို ဖြတ်ထားလိုက်ပါရစေ။ ဒုတိယပိုင်းမှာ အပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေ မေးကြ၊ ဖြေကြတာကို တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ၊ တတိယပိုင်းမှာတော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် beat question တစ်ခုစီ မေးကြတာရယ်၊ ပရိသတ်အမေးအဖြေနဲ့ ပွဲအဆုံးသတ်ပိုင်းကို တင်ပြပေးသွားပါမယ်။
(((((((((((((((ဓါတ်ပုံအတော်များများက ဖေ့စ်ဘွတ်ကမိတ်ဆွေများရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၇ယ်၊ ဆရာမမြသွေးနီဆိုက်ကဓါတ်ပုံတွေပါ။ )))))))))))))))))))
Posted by ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) at 3:07 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 4, 2012 at 4:01 AM
ပြည့်စုံတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလေးကို လာဖတ်သွားပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် မရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ခုလို ပြန်တင်ပေးကြတဲ့သူတွေကြောင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
htawoo August 4, 2012 at 6:57 AM
ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေ အကုန်လုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အားထုတ်ထားတာကို တွေ့ ရှိရပါရဲ့...
ဆရာမ မြသွေးနီ မတင်ထားရသေးတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်ကို တွေ့ ရှိရပါကြောင်း ပြောကြားရင်း
သိပ်မကြာခင် ကျန်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက် အားပေးနေပါ့မယ် ဆရာ...
Anonymous August 5, 2012 at 3:32 AM
အရမ်းကို ပြည့်စုံပါသွားပါတယ် အစ်ကိုရေ
ဒုတိယပိုင်း တတိယပိုင်းတွေကိုလည်း စောင့်နေပါတယ်
mstint August 5, 2012 at 6:15 AM
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဖတ်သွားတယ် မောင်ဝေမိုးနိုင်ရေ။ အတော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖတ်လိုက်ရတော့ အားပြိုင်ပွဲနေ့လေးကို ပြန်သတိရသွားတယ်။ အသက်ငယ်ပေမယ့် ပညာရင့်ကျက်တဲ့ လူငယ်တွေကို ချီးကျူးမိတယ်။
နောက်ဆက်ရန်လေးတွေ မျှော်နေမယ်နော်။ (စကားမစပ် တီတင့်လည်း မောင်ဝေမိုးနိုင်နဲ့ ပွဲပြီးရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ဘို့ တွေးထားတာ မောင်သက်တန့်ချိုက ဆေးရုံပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ အားနာလို့ ပြန်သွားလိုက်တယ်)
lwannaung August 6, 2012 at 12:05 AM
မေးသူဖြေသူများအား လေးစားလျှက်။။။။။ဆွေးနွေးပွဲကို ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပါကြောင်းးးးး
ကော်ပီလုပ်သွားတယ်ဗျို့။ my hero ဆိုတာကြီးကို ပြောင်းလို့မရဘူးလားဗျ။ ပြောကြည့်တာပါ။ အဲပုံတင်ထားတော့ တချို့စာဖတ်သူတွေက အကို့ရဲ့တချို့စာတွေကို အဲဘက်ယိမ်းတယ်ထင်မှာစိုးလို့ပါ။just suggestion.bro!
ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) August 7, 2012 at 8:08 PM
အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ညီ့( ကျွန်တော့်ကိုအကိုခေါ်ထားလို့ အသက်မသိပေမယ့် ညီပဲခေါ်လိုက်ပါတယ်) အကြံပေးသလို တချို့ကပေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို နိုင်ငံရေးသမားလို့တောင် တချို့ကထင်နေကြပါတယ်။ ညီပေးတဲ့အကြံဥာဏ်ကို လေးစားသောအားဖြင့် My Hero ဆိုတဲ့ စာတန်းကို ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။ စေတနာနဲ့ အကြံပေးမှုအပေါ် အစဉ် အောက်မေ့သတိရလျက်ပါ
PhyoPhyo August 8, 2012 at 1:22 AM
အစ်မ မမြသွေးဘလောဂ့်မှာလည်း ဖတ်ပါတယ်။ ဒီမှာလည်း ရေးပေးထားလို့ ဖတ်သွားပါတယ်။
အားလုံး ဆွေးနွေးနိုင်ကြလို့ ချီးကျူးမိတယ်။ စာကောင်းတွေ များများပေါ်လာပါစေ။ စာဖတ်သူတွေများလာပါစေပေါ့။
စာရေးချင်သူအားလုံးလည်း စာတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေ။ စာတွေလည်းစိတ်ကြိုက်ရေးနိုင်ပါစေ။
အချိန်အားရတိုင်း လာလည်ပြီး စာတွေဖတ်ပါမယ်။